:Bọchị: Jenụwarị 8, 2020
Ulukışla Boğazköprü Line Km: 55 + 185 passfefe Efere Maka Mpempe Nke abụọ Mpaghara chazụta Ọrụ Direction (TCDD) nke Statelọ Ọrụ Obodo Stọt (TCDD) nwere ọnụ ahịa ruru 2 TL na ọnụego ya bụ TL 2019. [More ...]
Ọ gaghị adị mma ma ọ bụrụ na a na-ahọrọ Nrụpụta Imeụlọ na ilgbọala Mbupu ụgbọ ala
1. N’ọnwa gara aga ka enyere ụlọ ọrụ CRRC nke China maka Kongo Rail System Metro Line na Metro Vehicle ihe dị ka nde 1.2 Euro (7 ijeri 900 nde TL). N'afọ gara aga na Istanbul 272 [More ...]
Ingbọ oloko dị elu na Sivas na njedebe nke Eid al-Fitr
Nzukọ General General nke ọgbakọ na nzukọ nke abụọ nke 2020 Gọvanọ Salih Ayhan na Sivas Mayor Hilmi Bilgin gara. Ayhan na Bilgin zulitere ọtụtụ okwu na Sivas [More ...]
Obodo Van Metropolitan na ngalaba ndị uweojii na ngalaba na-ahụ maka nchekwa okporo ụzọ na-achịkwa ụgbọ njem ọha na eze na obodo ahụ. Onye na-esote onye isi odeakwụkwọ ukwu nke obodo ukwu Assoc. Dr. Obodo ukwu na Ali Özvan [More ...]
Mayor Güler nyochara Çambaşı Plateau Bungalow useslọ
Onye isi obodo nke Ordu Obodo Mehmet Hilmi Guler, Kabaduz district nke Çambaşı Plateau wuru na nyocha ndị a chọtara na ngalaba ahụ. A na-emepe ụdị, nke mepere na Çambaşı Plateau n'oge na-adịbeghị anya, nwere ike pụọ na nrụgide nke obodo. [More ...]
Okporo ụzọ Njem Bülent Ecevit kwụsịrị
A na-arụ ọrụ na okporo ụzọ njikọta nke Bülent Ecevit Bridge Mgbanwerịta, nke Manisa Metropolitan Munara rụrụ na Salihli wuru. Kurtuluş Kuruçay, Onye isi nke Ngalaba Na - arụzi Ewu na Mmezi nke Ọchịchị Obodo Manisa [More ...]
Itinye n'ọrụ Smart Taxi na Gaziantep
Na mmekorita nke Gaziantep Metropolitan Obodo, berlọ nke ndị ọkwọ ụgbọala na omogbọala, emere nke izizi n’ime ogo nke ụgbọ njem Smart. “Smart Taxi la Fatma Şahin, Onye Isi Obodo nke Obodo ukwu, Ünal Akdoğan, Onye isi oche nke oflọ Ndị Ọkwọ ụgbọala na Autgbọala. [More ...]
SAKBIS Rịpụrụ 8 puku Times na ọnwa asatọ
Citizensmụ amaala na-egosi nnukwu mmasị na SAKBİS Smart Bicycle Sistem nke Sakarya Metropolitan Obodo mejuputara. Ezubere ya na akụkụ dị iche iche nke obodo ahụ ma na-eje ozi na isi 15, ndị debanyere aha SAKB aS dị 8 [More ...]
A na-enwe nzukọ ịhazi njem na Kayseri
Onye isi obodo nke Obodo Kayseri Memduh Büyükkılıç, dị ka mpaghara njem niile iji nye ọrụ dị mma karịa, ha kwuru na ha na-anwa. Mayor Büyükkılıç kwuru nke ahụ [More ...]
IMM na-echekwa gburugburu ebe obibi site na imeghari ụgbọ mmiri na-atọ ụtọ nke Economy
Obodo Obodo isi obodo Istanbul na - achịkọta ihe mkpofu nke ụgbọ mmiri ndị na - agafe na Bosphorus ma weghachite ha na akụ na ụba. Site na oru gburugburu ebe obibi, a na-emegharịgharị ihe ruru nde cubic mita nke ihe mmanụ si na ha ruo taa. Ma Istanbul ma [More ...]
Antalya Akwukwo Ibu Ebe Antalya Ga-adi
A ga-enwe ihe idozi nsogbu nke njem Antalya tinyere akụkụ obodo. Onye isi obodo nke Antalya Metropolitan Munh Muhittin Böcek, Antalya, atụmatụ, iwu, njirimara na-aga n'ihu na ebumnuche nke ime obodo. N'ọnọdụ a, ikpuchi mpaghara asaa [More ...]
Ationgbọ njem kwa ụbọchị site na obodo ukwu na Saklıkent Ski Center
Italitali na-ezute snow. Obodo ukwu na-enye transportationgbọ njem ọha nke ụbọchị asaa gaa Saklıkent Ski Center, otu n'ime ebe ndị njem Antalya dị mkpa maka oge oyi. 7 puku 2 kwa ụbọchị ịdị elu Antalya kwa ụbọchị [More ...]
Eriri okporo ụzọ Erzincan-Gumushane-Trabzon nke na-aga n'ihu na mmejuputa onye isi otu Trabzon Metropolitan Municipality Member na Trabzon-Erzincan Railway Platform Saban Bulbul kwuru na a ga-arụcharịrị ihe owuwu a ka emejuputa usoro a. Nightingale, “Azụ [More ...]
Transport na Infrastructure Minister Cahit Turhan, ọdụ ụgbọelu gafee Turkey afọ gara aga, kwuru na kpọmkwem n'ụzọ njem na 209 nde 92 puku 548 njem ọrụ na-nyere. Minister Turhan, State ọdụ ụgbọ elu Authority (DHMİ) [More ...]